FAQs - Timpson Welding Equipment Co., Ltd.
Asio loha maty?
Apetraho eo amin'ny fijoroana ny masinina, nisafidy ny lohan'ny maty araka ny savaivain'ny fantsona ary apetaho eo amin'ilay masinina. Raha ara-dalàna, ny farany kely dia eo aloha, ny farany lehibe kokoa ao aoriana.
Aleo ny herinaratra (alao antoka fa ny herinaratra dia tokony hiaraka amin'ny mpiaro amin'izao fotoana izao), ny jiro maitso ary ny jiro mena, andraso mandra-pahatongan'ny jiro mena ary tazomy hatrany ny maitso, izay manondro ny fidiran'ny masinina amin'ny maody fanaraha-maso ny mari-pana ary ny milina dia mety ho ampiasaina.
Fanamarihana: mandritra ny fomba fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny fiara, ny jiro mena sy ny jiro maitso dia ho faty na tsia, izany dia manondro fa voafehy ny masinina ary tsy hisy fiantraikany amin'ny fiasa izany.
Ampiasao ny cutter hanapahana fantsom-panafenana, atosiho ny fantsom-batana ary ampidiro ao anaty loha maty tsy misy fihodinana. Esory eo noho eo izy ireo rehefa tonga ny ora fanafanana (jereo ny tabilao etsy ambany) ary ampidiro.
Savaivony ivelany Halalin'ny hafanana Fotoana hafanana Fotoana fanodinana Fotoana mangatsiatsiaka